Weriye Maxamed Maxamuud Tuuryare oo ku geeriyooday isbitaalka Medina
Updated About:209 days ago 1
Allaha u naxariistee Weriye Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa caawa ku geeriyooday isbitaalka Medina kadib markii toddobaad kahor ay koox bastoolado ku hubeysan ay ku dhaawaceen degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Weriye Maxamed Maxamuud Tuuryare oo ka tirsanaa weriyaasha idaacada Shabelle oo ka mid ah idaacada ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa kooxo ku hubeysan bastoolado waxa ay ku weerareen degmada Wadajir 21kii bishan isagoo ka soo baxay masjid ku dhowaa gurigiisa halkaa oo ay ku dhaawaceen.
Allaha u naxariistee weriye Tuuryare ayaa lagu daweynayay tan iyo markii uu dhaawacmay isbitaalka Medina oo ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho. Hase yeeshee weriyaha ayaa ugu geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray caawa kadib markii xaaladiisu ay xumaatay maanta.
Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa noqonaya weriyihii saddexaad ee ka tirsan idaacada Shabelle oo u dhinta rasaas ay ku dhufteen dhalinyaro bastoolado ku hubeysan.
Horaantii sanadkan ayaa la diley agaasimihii idaacada Shabelle Allaha u naxariistee Xasan Fantastico isagoo sii galayay gurigiisa halka bartamihii sanadkan lagu diley meel aan ka fogeyn gurigiisa weriye Axmed Caddow Canshuur oo ka mid ahaa weriyaashii ugu caansanaa idaacada Shabelle.
Rufaci cali says:	October 29, 2012 at 3:22 pm	Max’ed Maxamuud Tuuryare Waxa thy ruux loo bahna oo la wayay waxaad aheyd halyeey lagu hurdo doqon kii ku dilay gacanta kuula tgy kan dhintay manta aduunyada waa isaga.